Ngaba undibonisa ithuluzi elungileyo lokukhuthaza i-Amazon yokuthengisa?
Ngaphambi kokuba siqale, makhe sijamelane nayo - uludwe lwemveliso yakho luninzi kakhulu ukukulandelela nokulawula ukuba uphumelele ukuthengisa i-Amazon ngokwenza konke. Kuya kuba yinto engaphumelekanga okanye yinto engapheliyo, ngaphandle kokuba uya kuzinceda ngokulandelelana okufanelekileyo kunye ne-toolkit yophando. Ngenhlanhla, kukho iprogram ehlukileyo ekhoyo ngoku kwiimarike. Nangona isabelo seengonyama zabancedisi be-intanethi singasetyenziselwa ukukhululeka, ezinye zezona zinamandla kakhulu zibonelela ngeenguqu ezipheleleyo zeoli ezihlawulwayo. Naluphi na, apha izicwangciso zam ezintathu eziphezulu ezibonakalayo kunye nokusebenza okuvandlakisiwe ukukhuthaza ukuthengiswa kwe-Amazon kunye nokwenza ezinye izinto zibe lula.
Impendulo yeGenius - iya kuba yimpendulo eyenziwe kakuhle kwi-system yokuhlaziywa kwi-Amazon eyenza ukuba wonke umthengi anelisekile ngokupheleleyo, Kakade, ukuba awufuni ukufumana uluhlu lwemveliso yakho ludonwe ngaphantsi kokukhangela ngaphaya kwalo. Esi sixhobo sasisebenza kum njengemilingo, njengoko ndatshwenyeka kuyo yonke impendulo engalunganga efuna ukulungiswa ngokukhawuleza ngaphambi kokuba ichithe nayiphi na impembelelo embi kwishishini lam. Ingakumbi - ungasebenzisa i-Feedback Genius ukuqhuba iposi ngokuzenzekelayo ngendlela yesicelo esihloniphekileyo kubathengi bamuva-nje ucela ukuyeka impendulo emihle okanye ukuphonononga. Kwaye kusebenza, kuba ukugcinwa kokwaneliseka kwamakhasimende okwaneleyo kuye kwakha isicwangciso esilungeleleneyo - kungekhona nje ukukhuthaza i-Amazon sales, nut ukunika ithuba lokuba mhlawumbi nayiphina projekthi yezorhwebo.
I-Jungle Scout - ingaba isisombululo esiphezulu sokukhuthaza ukuthengisa kwe-Amazon kulabo bathengisi abafumene bengenalo ulwazi olutsha malunga nomkhiqizo omtsha, ixabiso elichanekileyo okanye ukusabalalisa ngokufanelekileyo ukuhlala ngaphandle ukhuphiswano oluqinileyo olulawulayo apho. Zigcine uzihlaziye kwaye ungalokothi ulibale amathuba okufumana ithuba, ubuncinane ngexesha. Ziziphi iimveliso ezisemgangathweni yezentengiso kwi-Amazon okwangoku? Ziziphi iimpawu eziye zanda kakhulu? Ziziphi iimveliso ezinokubakho ezifunekayo kwaye zifanelekile ukubonisa uluhlu lwemveliso yakho? I-Jungle Scout yindawo yokujonga i-niche watchdog eya kukunceda ufumanise nayiphi na imifudlana efihliweyo yentlawulo ukwenzela ukukhulisa i-Amazon yakho yokuthengisa kwaye uqhubeke uqhuba isinyathelo esinye phambi kwamagosa akho amashishini afutshane.
- enye inkulu yokukhetha ukuthengiswa kwe-Amazon yakho ngokusebenzisa uphando lweemveliso kwindlela efanelekileyo. Kwaye ndincoma ngokukhawuleza ukuba sizame le sixhobo ukufumana ezinye zeenzuzo ezilandelayo: amagama asemgangathweni asebenzayo kunye nemigqaliselo yokukhangela yamashishini akho atholakalayo ukuze ufumane inzuzo yakho, ukulungiswa okuhle kakhulu kweeprogram zePPC, ukuqonda okubalulekileyo kwimiba engundoqo yamandla, indlela yokuhamba indlela eya kwiindawo ezisemgangathweni ngenzuzo ngokuncintisana ngokukhawuleza ukuba ungene, nangaphezulu. Emva kwakho konke, kunye nolawulo lwalo mngcipheko kunye nenkcitho yokuqikelela ukuthengiswa Inkalo ihlala isetyenziswa njenge-one-stop-shop ngisho nabathengi bexesha elininzi abanamakhono kwi-Amazon.